shaqooyinka maamulka Dadweynaha | khayraadka Shaqada iyo mustaqbalkiisa ka USAHello | USAHello
shaqooyin iyo xirfado maamulka Dadweynaha
Baro shaqooyinka maamulka dadweynaha iyo noocyo kala duwan oo aan faa'iido doon ahayn iyo shaqo adeega dadweynaha. Read ku saabsan waddooyinka mustaqbalkiisa kala duwan oo aad qaadi karto in maamulka dadweynaha. Ogow waxa tababarka aad u baahan tahay iyo meesha aad u bilowdo shaqo raadintaada.
shaqooyinka maamulka Public waa shaqo adeega dadweynaha. In badan oo ka mid ah shaqo, kuwaas oo, aad ka shaqayn doonto xukuumadda - tani waxay noqon kartaa degaanka, gobolka, ama federaalka (qaran) dowladda. Ama waxaad ka shaqayn karo urur aan faa'iido doon ah. Tani waxay noqon kartaa wax ka caawinta dadka ay helaan guryo si lacag loogu uruurinayo hay'ad samafal ah.
shaqooyinka maamulka dadweynaha iyo adeegyada ay bixiyaan inta badan dhibaatooyinka lagu xaliyo macaamiloon. Dhibaatooyinku waa qayb ka mid ah nolosha, oo had iyo jeer uu jiro dalab loogu talagalay dadka doonaya si wax looga qabto dhibaatooyinkaas. Haddii aad jeclaan caqabadaha, tani waa beerta xiiso leh si aad u hesho. shaqo A ee dawladda iyo maamulka waa meel aad u caawin karto dadka iyo bulshadaada.
Taas oo shaqada maamulka dadweynaha?
shaqooyinka maamulka Public raaci karaan Waddooyinkiisa badan oo kala duwan:
maamulka Waxbarashada - waxbarasho waa qayb weyn oo ka mid ah adeegyada dawladda. Professionals ee aagga this of maareeyo dugsiyada iyo kulliyadaha.
agaasimaha Fulinta - agaasime ka ahaa hay'ad samafal oo u dooda ururka, kicisaa lacag, qabataa kulan oo u yeelaan waajibaadka shaqaalaha. Baro sida koox loo agaasimo doon fulinta.
taliye maamulka Dadweynaha - taliyayaal talin hay'adaha dowladda iyo kuwa aan faa'ido ku saabsan arimaha sida dejinta siyaasadaha, kulan miisaaniyadda, iyo sida ay si fiican u abaabulo.
Duqa - badhasaab hadlaan, waayo, magaalooyinka iyo bulshada, golaha magaalada shaqeeyaan, oo waxaad ka samaysaa qorshe si ay u xaliyaan dhibaatooyinka bulshada. Saraakiisha Degmooyinka waxaa la doortaa.
kaaliyaha Program - kaaliyaha barnaamij ka caawisaa abaabulaan barnaamijyo iyo taageero barnaamijyada agaasimaha - a dhagax lugaha fiican in shaqooyin kale oo aan faa'iido-. Baro sida loo noqdo kaalmada barnaamij.
Tababaraha Case - Tababaraha kiis ka caawisaa dadka qaba xaaladaha si gaar ah ay, sida dhaqaalaha, sharci, caafimaadka, shaqada, ama arrimaha guryaha. xirfadaha laba luqoodlayaasha ah ee baahida, sidaas darteed tani waxay noqon lahaa mustaqbalkiisa ciyaareed aad u fiican qaxootiga iyo soo galootiga.
oo ah falanqeeye Program - falanqeeyayaasha barnaamijka loo horumariyo barnaamijyada by qiimaynta iyo iyaga falanqeeyo, helidda siyaabo si aad u wax ku ool ah. Tani waa khibrad qiimo leh sida barnaamijyo badan ee dawladda iyo kuwa aan faa'ido loo hagaajin karaa iyadoo la kaashanayo ka baxsan.
Turjumaan iyo turjubaan - turjubaano erayo lagu hadlo iyo wada hadalka shaqeeyaan, iyo turjumaanada erayo qoraal ah ka shaqeeyaan. Qofka isku samayn karaa labada shaqo. Kuwani waa shaqo weyn u qaxootiga iyo muhaajiriinta. Baro sida in ay turjumaan afka ah ama.
takhasusay Housing - dadka ka shaqeeya shaqooyinka kuwaas oo masuul ka tahay caawinta qoysaska ay helaan guryo la awoodi karo. Tan iyo baahida loo qabo guryo la awoodi karo u kacaya loogu talogalay qaxootiga iyo soo galootiga, tani waxay noqon doontaa xirfadiisa weyn yihiin inay fiiriyaan.
associate Research - haddii aad xiisaynayso in qabashada cilmibaarisyadii iyo waraysiyo, oo soo saara qalabka iyo warar sheegaya, Wuxuu noqon lahaa mustaqbalkiisa ciyaareed aad u fiican oo kuu.
Ma maamulka dadweynaha shaqo sax ah ii?
Haddii aad jeceshay la dadweynaha ka shaqeeya, tani waa beer mustaqbalkiisa khayr idiin ah. Isgaarsiinta muhiim ah aagga - waxaad u baahan doontaa xirfadaha qoraalka wanaagsan iyo xirfadaha Ingiriisi wanaagsan.
Sidoo kale, aad hantida ku cusub si aad u isticmaalka wanaagsan gelin karaa! Your xirfadaha luqadda iyo fahamka dhaqamada kale lagu qiimeeyo doontaa beerta kasta meesha aad ka caawiyo muhaajiriinta ama ka qabashada dalalka kale.
Haddii aadan hubin haddii ay tahay shaqo kugu habboon, Waad awoodaa qaataan imtixaanka is-qiimaynta a at careeronestop.org. Waxa kale oo aad sameyn kartaa in daawato video ah oo ku saabsan dowladda iyo shaqooyinka maamulka dadweynaha.
Waxaad ka heli kartaa galay mustaqbalkiisa adeegga dadweynaha siyaabo dhowr ah.
Isticmaal aad waayo-aragnimo
Waxaad ka heli kartaa galay qaar ka mid ah shaqooyinka maamulka dadweynaha sababo la xiriira waaya aragnimada shaqada. Dadka galaan maamulka guud ka beeraha kale oo badan: sayniska, marketing, caafimaadka, ganacsiga, iyo waxbarashada. Tusaale ahaan, haddii aad ka shaqaysay sida macallin, kuu soo gudbin karo shaqo maamulka waxbarashada. Haddii aad u shaqeyso guryaha yar yar aan faa'iido-, laga yaabaa in aad ka booska turjubaan guurto isagoo maamulaha kiiska ee dadka ka caawiya in ay helaan guryo ah. Haddii aad hore u tahay shaqaale dadweynaha in shaqo kasta, oo kaa caawin kara sidoo kale.
Shaqo-bixiyeyaal badan eegi doonaa aqoonsiga gaar ah. Waxay rabaan in laga yaabaa in qof la degree Associate ama shahaadada Bachelor ee maamulka dadweynaha, laakiin inta badan degree kale in beer la xiriira samayn doonaa - shaqada bulshada, maamulka, iyo shahaadooyinka yihiin oo dhan waxtar leh xirfadaha maamulka dadweynaha. Master A ee maamulka dadweynaha (MPA) waa shahaado sare oo loogu talagalay dadka doonaya in ay ka shaqeeyaan dowladda. Waxay caadi ahaan qaadataa laba sano oo kale on top of degree aad Affarta.
A Manager Public Certified (CPM) waa qof ayaa dhameystirtay barnaamij tababar shahaado. Horaan idiinku Haddii qofka shaqaalaha ah dadweynaha, Wuxuu noqon lahaa hab si aad u hesho maamulka. Raadi Dabcan CPM a.
Waxaa suurto gal ah si aad u hesho MPA internetka ah halka aad ka shaqayso iyo waayo-aragnimo ka helaan shaqaale dawladeed ama aan faa'iido-. Raadi dugsiyada online la Programs MPA.
Raadi fasalada kuu dhow
kulliyado badan ayaa waxay bixiyaan koorsooyin keeni kara shaqooyinka maamulka dadweynaha. Dabcan A caadiga ah ka mid noqon doona maamulka dadweynaha, go'aan qaadashada, hay'adaha, miisaaniyada, ururada dadweynaha, iyo maamulka dawladda. Raadi college beesha kuu dhow.
Waxaad ka heli kartaa waayo-aragnimo by tabarucidda ee urur maxalli ah. Waxaad baran doontaa sida ururada aan faa'iido-shaqayn, wanaajiyo hoggaanka iyo isgaadhsiinta xirfadaha, iyo in la dhiso shabakad aad. Raadi meel ay u tabarucaan at Volunteermatch.org.
Haddii aad leedahay shahaado maamulka guud ee dal kale, Upwardly Global caawisaa soo galootiga shaqo-idman, qaxootiga, Entry Level, iyo soo galootiga ah gaar ah dadka haysta fiisada (SIVs) guuleysatey shaqooyinka xirfadeed ee USA.
Ma rabtaa in aad u shaqeyso dawladda Maraykanka, dawladda hoose, ama urur aan faa'ido doon ah? Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah fursadaha:
Raadi websites shaqo online
Idealist.org qoraa shaqooyinka ururada aan faa'iido-.
Isticmaal websites dowladda
Si aad u eegto shaqooyinka dawladda gobolka, bilaw website-keeda. Waxa ay noqon doontaa magaca gobolka ku xiga “.Gov” - tusaale ahaan, Montana.gov. Bogga guriga, waxaad ka heli doontaa tab ah oo sheegay in wax la mid ah xirfadaha, shaqada, shaqaale ama shaqooyinka. Dowladda Maraykanka ayaa waxay leedahay website shaqooyinka dawladda. Sida caadiga ah, aad leedahay si aad u noqon muwaadin Mareykan ah si ay u shaqeeyaan dowladda federaalka ah, laakiin waxaa ka reeban. Your xirfadaha luqadda yaabaa in loo baahdo, tusaale ahaan.
Isticmaal xarunta shaqada
xarumaha shaqada Dawladda ee magaalo kasta waa lacag la'aan. Waxay bixiyaan talo iyo sii liiska shaqooyinka deegaanka. Waxay ka mid noqon doona gobolka iyo shaqooyinka magaalada iyo aan faa'iido doon ahayn. Waxa kale oo aad ka heli waxaa kaa caawin kara resume iyo codsiyada shaqada. Waxay kugu xidhi karaan tababarka iyo waxbarashada shaqada. Raadi xarunta shaqada ee kuugu dhow.
Sida loo noqon agaasimaha fulinta aan faa'iido-a
Sidee in ay turjumaan afka ah ama
Sidee si loo noqdo kaalmada barnaamij aan faa'iido-a